Usuku abesifazane abangazi luyofika nini – Bayede News
Usuku abesifazane abangazi luyofika nini
UMTHETHOSISEKELO waseNingizimu Afrika uyakugcizelela ukuvikelwa kwabesifazane
Kweminye yemihlangano lapho abesifazane babezwakalisa ilaka labo ngokuhlukunyezwa
UMTHETHOSISEKELO waseNingizimu Afrika uyakugcizelela ukuvikelwa kwabesifazane nezingane. Lokhu kuqikelelwe kakhulu ngesikhathi kungena uHulumeni wedemokhrasi ngowe-1994 okungangokuba sekube nezingqungquthela nemikhankaso eminingi ewuphawu lokuzibophezela ekuqedeni lesi sihlava.
Kusuka kuMengameli wokuqala ngaphansi kwedemokhrasi uMnu uNelson Mandela kugcine kokhona njengamanje uMnu uCyril Ramaphosa bonke baba nezinhlelo eziqhakambisa amalungelo abesifazane nezingane nezinhlelo zokubavikela. Naphezu kwayo yonke le mizamo ukuhlukunyezwa kwabo zinsuku zaphuma sekwaphenduka insakavukela umchilo wesidwaba. Muva nje abayizisulu zalokhu kuhlaselwa kuba abafundi ezikhungweni zemfundo ephakeme.
Isigameko sakamuva esingundabamlonyeni ezweni ngesokuhlaselwa kubulawe umfundi waseNyuvesi iWestern Cape u-Uyinene Mrwetyana lapho umsebenzi wasePosini oneminyaka yobudala engama-42 ezivumele ngokwakhe ukuthi wamdlwengula maqede wamsoconga. Lo mfundi kuthiwa waya eposini eyobheka iphasela lakhe watshelwa yilesi sisebenzi ukuthi kumele abuye emuva kwesikhathi esithile ngoba ugesi awukho. Ekubuyeni kwakhe umsebenzi wayesesele yedwa nokuyilapho amgila khona wathatha isidumbu sakhe wayosilaxaza eLingelethu West, eKapa.
Ngasekupheleni konyaka odlule abesifazane bangenela ukhukhulelangoqo wemashi eyamisa ukusebenza ezweni eyayibizwa nge #TotalShutdown emuva kwezikhalo eziningi ngabakubiza ngokuhlukunyezwa kwabo. Ukubanjwa kwale mashi kwazala ukubanjwa kwengqungquthela iGender Based Violence Summit ngoLwezi wezi-2018 nalapho uMengameli uCyril Ramaphosa azibophezela ekusukumeleni izikhalo ezibekwa ngabesifazane ngokuhlukunyezwa kwabo.
UMengameli wabuye wethula iGender Based Femicide okwaba umcimbi owenziwa wahambisana nokuvulwa kweNkantolo yeMantshi iBooysen e-Oakdene eGoli eyehlukile kwezinye ezweni ngoba ingeyokuqala enazo zonke izinsiza zokubhekelela abesifazane abahlukunyeziwe njengoba kunezinkantolo ezihlukahlukene kusuka kwezixazulula izinkinga zemindeni, eyesondlo sezingane, neyodlame lwasekhaya.
Ngasekuqaleni kwalo nyaka ithimba lakuleli labesifazane abayizifundiswa labhalela owayenguNgqongqoshe Wemfundo Ephakeme uDkt uNaledi Pandor limnxusa ukuba asukumele udaba lokuhlukunyezwa kwabesifazane ikakhulukazi njengoba sekukapakele nasezikhungweni zemfundo ephakeme.
Leli thimba eliholwa uDkt uSiphokazi Magadla weNyuvesi iRhodes e-Eastern Cape lithi nakuba liyamukela imizamo kaHulumeni nezinhlangano zomphakathi ekulweni nesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane, kodwa libona ukuthi kukhona nokungenziwa uNgqongqoshe nabambisene nabo.
Isililo ngesokuthi uHulumeni usukuma kuphela uma sekukhona okwenzekile okwenza yonke imizamo yakhe ingazweli. Kusukela ngonyaka odlule sekube nezigameko ezehlukene zokuhlukunyezwa kwabesifazane abanye baze babulawe ngabesilisa abasuke besondelene nabo.
Leli phephandaba like labika phambilini ngesigameko sokubulawa kukaNks uBonge Tenza ngowayeyisoka lakhe elalingutolika enkantolo yeMantshi eThekwini uMnu uSandile Mkhize nezingane zakhe ezintathu. UThabani Mzolo osolwa ngokudubula owayeyintombi yakhe uNks uZolile Khumalo owayengumfundi eMangosuthu University of Technology ehlala endaweni yabafundi eLonsdale eThekwini usahamba inkantolo.
Esinye isigameko okusakhulunywa ngaso ngesokubulawa kukaNks uKarabo Mokoena waseGoli okwagcina ngokuthi kugwetshwe owesilisa owayeyisoka lakhe uSandile Mantsoe.UKarabo wabulawa maqede isidumbu sakhe sashiswa, yisoka lalivuma icala lokushisa isidumbu kodwa laphika ukuthi lambulala.
Namanje akukaze kuzwakale lutho ngokwaphakanyiswa iKomidi Lomnyango Wezemfundo ePhalamende elathi izinhlaka zikahulumeni nalezo ezibizwa ngamaChapter 9 institutions kumele zichaze ukuthi kungani liphezulu izinga lodlame nokuhlukumeza okubhekiswe kwabesifazane.
Okunye okungaziwa ukuthi kwaphelelaphi iziphakamiso ezathathwa phakathi kwaleli komidi nabeKhomishini Yamalungelo Abantu, iHuman Rights Commission okwaphuma umbono wokuthi iKomidi lizosungula iKhomishini Ezobheka Ukulingana ebizwa ngokuthi iCommission on Gender Equality ukuze le Khomishini ibike kulo ngokuthi iziphi izinyathelo ezithathayo odlameni olubhekiswe kwabesifazane ezikhungweni zemfundo ephakeme.
Bakhona nabanye besifazane ababulawayo zinsuku zonke ezweni okugcina ngokuthi amacala abo angakutholi ukugqama njengabasemadolobheni.
Kwesinye isigameko okusakhulunywa ngaso esenzeke kuleli sonto sokubulawa kwezelamani ezine eWyebank eThekwini sibe sikhulu isikhalo ngokuhudula izinyawo kukaHulumeni ekuthatheni izinyathelo uma kuhlukunyezwa abesifazane nezingane. Kulesi sigameko kubulawe u-Ayanda Jiyane obeneminyaka eli-17, uSiphosethu Mpungose obeneminyaka eli-10, uKhwezi Mpungose obeneminyaka eyisithupha noKuhlekonke Mpungose obeneminyaka emine.
Uyise oboshiwe ngalesi senzo uSibusiso Mpungose kuthiwa ukhiphele isibhongo ezinganeni ngoba bese behlukanisa nonina esemxoshile nasendlini. Omakhelwane bathi unina walezi zingane ubephila ngokushaywa zinsuku zonke nabo belazi usizi lwakhe kodwa kungekho abangamsiza ngakho.
Ukuthula kukaMengameli uCyril Ramaphosa emuva kwalezi zigameko ezweni kuhunyushwe ngabaningi njengokuthi sekumphunyulile ukwethenjwa ngabesifazane. Usaziwayo uBonang Matheba ubhale enkundleni yokuxhumana utwitter ethi uthukuthele ngendlela uHulumeni athule ngayo ekubeni izwe libhekene nesikhathi senhlekelele. Ephawula uthe: “Ngicikekile. Lo Hulumeni uyimfeketho. Phumela ngaphandle. Phuma uhambe uyobona ukuthi kwenzekani la ngaphandle. Kukhona nabanye ababhalile bemgxeka ngokuqubisa kube sengathi akonakele lutho. Abanye bamchaze njengobaba wesizwe kodwa okufanayo nokuthi akekho. Omunye wabalaleli ohlelweni lwezindaba iSAFM iFocal Point uthe: “Lesi simo sesidinga umuntu onjengoMnu uJacob Zuma ongumuntu wabantu ngoba sekuyacaca ukuthi uMengameli okhona umele kuphela abantu abaphezulu, uma esedingeka phansi ziyima emthumeni. UZuma wayengahambisi ngendlela kokuningi kodwa ezintweni ezithinta uquqaba wayebonakala, angingabazi ukuthi namanje ngabe ukhuluma nabantu emazingeni aphansi”.
Kuphoqelekile ukuthi uMengameli anqamule ezinye izinhlelo zayizolo emhlanganweni iWorld Economic Forum (WEF) on Africa eqhubeka eKapa ukuze ayokhuluma nabesifazane abebebhikisha ngaphandle kwePhalamende. Uchaze isimo esiqhubekayo sodlame olubhekiswe kwabesifazane njengesimo esibucayi.
“Ngiyazi ukuthi nithi sekwanele. Nami ngiyavumelana nani ukuthi sekwanele manje”. Uthe amadoda adlwengula abesifazane kumele abolele ejele. “Sizoshintsha nemithetho ethile njengokuthi uma udlwengulile noma wabulala owesifazane uthola isigwebo sikadilikajele.
“Isizwe sisemanzini amnyama. Sonke siphazamisekile. Abantu ababulala abesifazane abanayo indawo kuleli lizwe.” Uthe noma elakuleli kungelona kuphela eselaziwa ngezigameko ezifuze lezi njengoba eFrance sekubulewe abesifazane abangama-25, kodwa akumele iNingizimu Afrika izithethelele ngokuthi ingcono, ngoba isimo sibi kakhulu kuleli.